Taphattoota kamtu garee cimaa pirimeerliigii torban kanaa keessa filatame? - BBC News Afaan Oromoo
Taphattoota kamtu garee cimaa pirimeerliigii torban kanaa keessa filatame?
Goodayyaa suuraa Meesut Oziil tapha Arsenaal Evartan 5 fi 2'n injifate irratti tokko galche tokko tumse
Taphoota pirimeerliigii Ingilizii kudhan dhuma torbee darbe taphatamee fi galchiiwwan 34 lakkaa'ame irratti ga'umsa cimaa muraasa agarreerra.
Hunduu irratti walii galuu dhaba ta'a malee, ga'umsi isteediyeemii Joon Ismiizitti Aaron Mooy fi Laawurant Depoyitri Haadarsfildiif galchuun agarsiisan waggaa 65 booda Maanchistar Yunaayitid injifatanii bara dorgommii baranaa mo'amuu dhabuu Yunaayitid dhaabu danda'aniiru.
Serjiyoo Aguweeroon tapha Barnileey injifatan irratti galchii hedduu galchuun riikardii kilabichaa qooddateera. Amma Siitiin garaagartummaa qabxii shaniin dursaa jira Chelsiinimmoo duubaa ka'e Waatford injifate.
Taphataan duraanii Pirimeerliigii Gaarz Kiruuks ''garee cimaa torban kanaa'' filateera. Walii galtuu?
Garee cimaa torban kanaa
Karra eegaa - Hugoo Looris (Totanhaam)
Goodayyaa suuraa Erga barri dorgommii baranaa eegale as Hugoo Looris kubbaa itti rukutame keessaa dhibbantaa 76 deebiseera.
Kubbaan inni kaleessa Filippee Kutinihoon rukutee fi Liivarpuul akka hin moone taasise ajaa'iba ture. Taphataan lammii Faransaay tapha chaampiyeensliigii irratti Maadriid waliin taphatan irratti agarsiisees bareeda ture. Dilbata kaleessaas waan kana irra-deebi'e fakkaata.
Ittisaa - Toomii Ismiiz (Haadarisfild)
Goodayyaa suuraa Toomi Ismiiz taphataa Haadarisfild kamuu caalaa kubbaan qaari'e nama barbaadu bira gahe(si'a jaha)
Maanchistar Yunaayitid morkii cimaarra jiraachuu isaanii booda hubatan. Ismiiz ga'umsa sadarkaa dursaa taphattootaan agarsiifamu nu agarsiise.
Ittisaa - Lewis Daank (Biraayitan)
Goodayyaa suuraa Taphattoota Barnileey Ben Mii fi Taarkowiskii (lamaanuu si'a 16) kubbaa danqan (block) malee taphataan biraa Lewsi Daank (isa bitaan jiru, 15) caalu hin jiru
Ittisaan Biraayitan Albiyoonif taphachaa ture. Yeroo Shaampiyoonshippii irratti taphachaa ture cimaa ture. Pirimeerliigii keessatti ga'umsa kana dafe nutti agarsiisa jedhe hin yaadne ture.
Dandeettin tapha West Haam irratti agarsiise taphataa pirimeerliigii keessatti akka turu mirkaneessa. Biraayitanis akka turu amaneera.
Ittisaa - Shen Doofi (Biraayitan)
Goodayyaa suuraa Bara dorgommii baranaa ittisaa Shen Doofi caalaa (si'a 62 ) mataa isaatin kubbaa galchii biraa fageesse hin jiru
Gaaffiin koo: Kilabni ittisuu fi leenjisaa Kiriis Hiwtaniin kilabiin miira garee horate pirimeerliigii keessa turuu danda'aa? Yoo turan, Doofin qabeenya guddaa ta'a - kilabichis malee.
Utubaa - Kevin De Biruuyine (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Maanchistar Siitiif yeroo duraa Fulbaana 2015 taphate as Kevin De Biruuyinen taphataa kamuu caalaa si'a 33 tumseera (assist)
Taphataan kuni tapha kana qofaarratti miti kan bareeche taphate. Booda kana wanti hubadhe yeroo De Biruuyinen kubbaa taphatu morkattoonni duubatti gara galchii isaanitti baqatu.
Utubaa - Aaron Mooy (Haadarisfild)
Goodayyaa suuraa Aaron Mooy bara 2017'tti galchiiwwan 10 keessaa harka qaba (galchii afur, tumsa jaha), taphattoota kaan 4'n caala
Kilabiin guddaa kilabii xiqqaa morkachuu jechuun ispoortessaan bunyaan beekamu karadeemaa akka loluuf ka'uuti. Maanchistar injifachuuf jeequmsa filachuun fala tokko waan ta'eef leenjisaan Haadarisfild Devid Waagnaris kanuma godhan.
Mooy akka bareeche taphachuu danda'u sammuukoo keessa jira.
Haala amma jiruun yoo itti fufe gaafa Amajjiin dhufe ija kilaboota kaanii seenuu danda'a.
Utubaa - Meesut Oziil (Arsenaal)
Goodayyaa suuraa Meesut Oziil pirimeerliigii irratti yeroo 43ffaaf tumsuu isaati - erga 2013 as taphataan biraa isatti qixxaatu hin jiru
Yeroo Aleksaandar Laakaazetteen, Meesut Oziil fi Aleeksis Saanchez erga takkaa yeroo hiriiran kuni mudata taanaan, leenjisaa Arsen Veengar isaan eeguuf waan fedhe gochuu qabu.
Taphi Dilbataa Evartan 5 fi2'n injifatan irratti taphattoonni sadan yeroo duraaf erga takkaa kan hiriiran yoo ta'u guddaa milkaa'ani.
Utubaa - Riyaad Maahrez (Leestar)
Goodayyaa suuraa Galchiiwwan lama taphoota pirimeerliigii lama darbe keessatti harka keessaa qaba (galchii tokko, tumsa tokko)
Tapha Iswaansii irratti ga'umsi Maahrez ajaa'iba ture; gaaffiin ka'u osoo taphataan kuni ga'umsa kana kanaan dura agarsiiseera ta'e leenjistoonni lamaan Raaniyeerii fi Sheekispiir ari'amu ture?
Dureessonni Leestar dogongora isaanii irraa barachuu qabu. Yeroo gabaabaaf leenjisaa mindeessuu hin qabani.
Jifataa - Gileen Marii (Biraayitan)
Goodayyaa suuraa Gileen Marii pirimeerliigii irratti galchii lama galche - lamaanuu West Haam irratti, akkasumas yeroo Kiristaal Paalaasif taphatu bara 2015'tti West Haam irratti lama galchee ture
Pirimeerliigii keessatti turuun Biraayitanif rakkisaa ta'u yeroo darbe barreesseen ture. Yoo turu ta'e garuu ga'umsa amma Gileen Mariin agarsiisu irra-deddeebbiin barbaadu.
Mariin jifataa cimaadha. Bakka kamuu taphachuu danda'a. Yoonammoo hin jarjaru.
Jifataa - Serjiyoo Aguweeroo (Maanchistar Siitii)
Goodayyaa suuraa Serjiyoo Aguweeroon galchii 177 galchuun seenaa kilabichaa keessatti riikardii Erik Biruuk qooddateera
Tapha boqonnaa duraa yeroo Nik Pop Bernaandoo Silvaa irratti balleessaa raawwate sana rukuttaa adabbii xumuraa ta'uu fi ta'u dhabuu isaa mormiin ture.
Ani istuudiyoo keessan ture viidiyoodhaanis yeroo hedduu irra debi'een ilaale. Garuu, murteessaan taphichaa waan sirrii murteessan natti hin fakkaatu. Galchiin Aguweeroo seenaa kilabichaa keessatti riikardii Erik Biruuk akka qoddatu taasiseera.
Goodayyaa suuraa Haari Keen tapha Liivarpuul 4 fi 1'n mo'an irratti Haari Keen galchiiwwan bareedaa lama galche.
Galchiin keen jalqaba irratti galche galchii duraa dirree Weembileeyitti galchedha.
Gareen cimaa torban kanaa Gaariz Kiruuks filate asin gadi fakkaata..